मेलम्चीका बाढी पीडितलाई सहयोग गर्ने अभियानमा जुटिन् वर्षा ! – Sandesh Press
मेलम्चीका बाढी पीडितलाई सहयोग गर्ने अभियानमा जुटिन् वर्षा !
July 1, 2021 205
सिन्धुपाल्चोकका बाढीपीडितको सहयोगका लागि अभिनेत्री वर्षा सिवाकोटीले अभियान सुरु गरेकी छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘मेलम्ची राहत अभियान’ सुरु गरेकी छन् ।
हुन त यति बेला थुप्रै कलाकारले बाढीपीडितका लागि सहयोग जुटाइरहेका छन् । यस मेसोमा अभिनेत्री वर्षाले चलाएको यो अभियानमा देश तथा विदेशबाट सहयोग जुट्न थालेको छ । उनले अभियानमा प्राप्त सहयोग नामसहित सार्वजनिक गर्ने जनाएकी छन् ।
उनले लेखेकी छन्, ‘बाढीपीडित मेलम्ची बासी आदरणीय दाजुभाइ एवं दिदीबहिनीको सहयोगका निम्ति आफ्नो तर्फबाट केही सहयोग गर्न अग्रसर भएकी छु ।’ उनले सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेकी छन्, ‘मेरो यो सानो पहलमा हजुरहरू पनि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने आउनुहोस् हातेमालो गरौँ ।उनले फेसबुकमा लेखेकी छिन् ।
सबैको प्रयासमा पीडामा रहेका मेलम्चीबासीलाई राहत मिल्ने आशा राखेको अभिनेत्री वर्षाले जनाएकी छन् । उनका अनुसार अभियानमा सहयोग जनाउन जोकोहीले प्रभु बैङ्कमा रहेको केबी फाउन्डेसनको खातामा रकम पठाउन सक्नेछन् ।
Prevशुक्रबारदेखि लामो दुरीको सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने चेतावनी
Nextएक नम्बरका स्वार्थी हुन्छन् यी राशिका व्यक्ति, आफ्नो भलोका लागि जे पनि हुन्छन् गर्न तयार
चितवनमा एमालेको भिडमा पसेका राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी हराएपछि….
दु;;ख;;द ख;;ब;;र : अस्पताल लैजादै गर्दा एक गर्भवती महिलाको बाटोमै मृ;;त्यु !